Fampitaovana ny mpianatra: fampandrosoana ny fanabeazana | Région Boeny
Ao anatin’ny tetik’asa fanohanana ny tanora sy ny fampiroboroboana ny fampianarana imasoan’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, dia tonga nanolotra tablette numérique miisa 50 ny fikambanana Jeune Chambre Internationale na ny JCI ho an’ireo mpianatra CM1 sy CM2 ao amin’ny Sekoly fanabeazana fototra Fanantenana, fokontany Abattoir Mahajanga ny zoma 24 oktobra lasa teo.
Izany dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny JCI sy ny Orange Solidarité Madagascar mba hahafantaran’ireo mpianatra ny teknolojia misy sy ho fampiharana ny Drafitr’asam-pirenena momban’ny fampandrosoana momba ny fampianarana hoy Rtoa Josie Randriamambeloma, filohan’ny Orange Solidarité. Ny fizarana tablette hoy izy dia tsy ho an’ny EPP ihany fa hitohy hatrany amin’ny Lycée ary mipetraka ho fananan’ny sekoly.
Ny Epp Fanantenana dia faha enina ambiny folo ao anatin’ireo telopolo voalohany nizarana ny tablette numérique manerana an’i Madagasikara.
Nanome voninahitra izao fanolorana izao ny solontenan’ny Talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena Boeny sy ny solontenan’ny Lehiben’ny Faritra. Nohamafisin’izy ireo fa ny fampianarana dia lova tsara indrindra, ary ny fampitaovana ara-dalàna ireny mpianatra ireny no antoky ny fampandrosoana ny fanabeazana. Ary anjaran’ny ray amandreny ny mampirisika ny zanany tsirairay hazoto hianatra.
Nanotrona an-dRtoa Talen-tsekoly tamin’ny fandraisana ireo fitaovan ireo ny mpampianatra sy ireo Ray amandrenin’ny mpianatra ao amin’ny EPP Fanantenana.
Nomarihin-dRtoa Josie Randriamambeloma fa roa ihany ireo sekoly nizarana ireo tablette numérique teto Mahajanga, dia ny EPP Fanantenana, ary ny EPP Belinta, Amborovy.